> Resource> Video> Olee otú iji tọghata Torrent ka AVI
Na a na nkuzi, ị ga-amụta otú iji tọghata iyi Videos ka AVI faịlụ. Dị ka ị maara, ebudatara iyi videos nwere ike ịbụ mpg, AVI, MP4, MKV, WMV, ma ọ bụ MOV format mgbe decompressed site WinRAR ma ọ bụ Zip ọ dị mkpa. Na-egwu ha were were, i nwere ike iji kasị mma free iyi Player dị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka ọtụtụ gị iyi faịlụ, converting ha ka ha AVI faịlụ bụ ezi mmasi; n'ihi na AVI format na-ebe-akwado site na a dịgasị iche iche nke media Player, video editọ, na obere ngwaọrụ.
Iji tọghata iyi ka AVI, gị mkpa a ọkachamara na mfe iji video Ntụgharị nyere n'okpuru echiche: 1) anọgide na-adị mbụ video na ọdịyo àgwà; 2) sụgharịa elu dakọtara mmepụta; 3) ultrafast ọsọ. Ebe a, Wondershare Video Ntụgharị-ukwuu tụrụ aro iji mezuo gị mkpa n'ụzọ zuru okè. Soro n'okpuru ndu na mezue n'elu akakabarede effortlessly.
Cheta na: Nke a na usoro bụ cross-ikpo okwu: Video Ntụgharị (na-akwado Windows 8/7 / XP / Vista) na Video Ntụgharị maka Mac (na-akwado Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6). Ha nwere otu atụmatụ na a ndu ewe Windows version screenshots.
Nzọụkwụ 1: Import iyi faịlụ
Pịa "Tinye Files" akara Ibu Ibu gị iyi faịlụ ma ọ bụ, dị nnọọ ịdọrọ ha kpọmkwem n'ime isi window. Mgbe faịlụ niile dị, ị nwere ike idozi na iji, ịgbanwe mmepụta aha, na ịhụchalụ ha na nri ihuenyo (ewere snapshots na-akwado).
Nzọụkwụ 2: Mee mmepụta format na ịgbanwe video ntọala
Pịa format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ, na mgbe ahụ họrọ "AVI" site na "Format"> "Video". Ọ bụrụ na ị chọrọ HD mmetụta, ị nwekwara ike họrọ "Format"> "HD" site na "HD AVI".
Nke a smart omume na-enyekwa parameters kemeghi panel maka ma ọdịyo na video, gụnyere bitrate, etiti ọnụego, codec, mkpebi, wdg Ị nwere ike ịnweta na ọnọdụ window site na ịpị "Mwube" nhọrọ. (Atụmatụ: I nwekwara ike ikewa a nnukwu iyi faịlụ n'ime ọtụtụ mkpachị site oge ma ọ bụ size, dị nnọọ lelee nhọrọ.)
Atụmatụ: E wezụga oké mkpa akakabarede ikike, nke a Video Ntụgharị na-enye gị anwansi edezi ngwaọrụ na-emetụ gị videos n'otu ntabi: cropping, trimming, tinye mmetụta, watermark, ndepụta okwu, wdg N'ihi nkọwa ndị ọzọ, biko rụtụ aka na User Guide.
Nzọụkwụ 3: Malite iyi ka AVI akakabarede
Pịa "tọghata" button na-amalite iyi ka AVI akakabarede. Nke a na usoro dị nnọọ oru oma na akakabarede na ọganihu mmanya ga-egosi na pasent na fọdụrụ oge. Mgbe akakabarede okokụre, ị pụrụ ịchọta converted videos site na ịpị "Open nchekwa".
Mission mechawo ya! Download n'okpuru video Ntụgharị na ahụmahụ hassle-free akakabarede ugbu a!
Olee otú Tinye Video ka Audio
Olee otú Mee a Multi ihuenyo Video